သဘာဝကျကျရင်ပတ်ပေါ်လမ်းပိုင်းအမှတ်လျှော့ချဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အကြံပြုချက်များ Sant • လှပမှု • သဘာဝကကုစား • စောင့်ရှောက်မှု "သဘာဝကျကျရင်ပတ်ပေါ်လမ်းပိုင်းအမှတ်လျှော့ချဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang6မတ်လ 2019
ရင်ပတ်ဖြစ်ကောင်းကိုယ်ခန္ဓာ၏အများဆုံးချစ်ရာသခင်သည်အပိုငျးမြား၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ သူကယုံကြည်စိတ်ချမှုပေးခြင်းအားဖြင့်အလှအပနှင့်ဣတ္ဝိသေသလက္ခဏာထဲမှာပါဝင်။ သို့သော်သူတို့မှာလည်းအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးထင်ရှားတဲ့ purplish သို့မဟုတ်ငွေအလိုင်းများနှင့်တူပြဿနာများမြို့သားရင်သားအပေါ် Stretch Marks သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုဖျက်ဆီးနှင့်သင့်လင်းလင်းရည်ညွှန်း Self-သတိကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ထိခိုက်။
La အရွယ်ရောက်ခြင်း: (ပြောင်းလဲနေတဲ့ဟော်မုန်းများနှင့်ရင်သား၏လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုကြောင့်) မိန်းကလေးများသည် ဖြစ်. ,
အရှုံးသို့မဟုတ် (အစကြောင့်အရေပြားဆန့်ရန်) လျင်မြန်စွာကိုယ်အလေးချိန်။
ကြက်ဥအဖြူကအရေပြား၏ပြုပြင်အနာရောဂါငြိမ်းစရာအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်နေကြရသောဗီတာမင် A, ပရိုတိန်းနဲ့ကော်လာဂျင်, ကြွယ်ဝနေသည်။ ကြက်ဥအဖြူထဲမှာပရိုတိန်းကော်လာဂျင်လမ်းပိုင်းအမှတ်၏အသွင်အပြင်လျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်အနေဖြင့်အရေပြားကိုအသစ်တဖန်မွေးဖွားကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဗီတာမင် A များအတွက်ကြောင့်အသားအရေ elasticity မြှင့်တင်ဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကြက်ဥအဖြူလည်းနုပျိုချောမွေ့အသားအရေအသွင်အပြင် restore ကြောင်းအမိုင်နိုအက်ဆစ်ကြွယ်ဝနေသည်။
အဲဒါကိုပျော့ဖြစ်လာသည်အထိကြက်ဥအဖြူရိုက်တယ်။ တစ်ဝါဂွမ်းဘောလုံးကိုအသုံးပြုခြင်း, သင့်လမ်းပိုင်းအမှတ်ပေါ်ကြက်ဥအဖြူသက်ဆိုင်ပါသည်။ တဆယ်မိနစ်နဲ့အခြောက်အပြီးနောက်ရေကိုအသုံးပြုပြီးဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ဆေးကြောပါ။ နှစ်ကြိမ်ဒီကုသမှုတစ်ပါတ်ကိုသုံးပါ။
သူတို့ပျော့ဖြစ်လာသည်အထိနှစ်ခုကြက်ဥလူဖြူရောမွှေပါ။ ထိုအခါ spatula နှင့်အတူသံလွင်ဆီထဲမှာနှိုးဆော်နှင့်ကောင်းစွာရောမွှေပါ။
ညင်ညင်သာသာ massaging နေချိန်မှာသင့်ရဲ့ပြဿနာဒေသများအားဤအရောအနှောလျှောက်ထားစတင်ဖို့။
ရှားစောင်းလက်ပတ်က၎င်း၏ elasticity တိုးတက်အောင်, သင့်အသားအရေရဲ့ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ကြောင်း antioxidants ပါရှိသည်။
သင်၏ရင်သားပေါ်လမ်းပိုင်းအမှတ်ပေါ်ဗီတာမင် E ကိုဆီတလက်ဖက်ရည်ဇွန်း Apply ။
စနစ်တကျအရေပြားကစုပ်ယူခံရဖို့ရေနံများအတွက်မိနစ် 15 20 အဘို့အနှိပ်ခံ။
သံပုရာဖျော်ရည်ကို တစ်ဦးအရောင်ချွတ်အေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်လျင်မြန်စွာလမ်းပိုင်းအမှတ်မှုကိုလျော့နည်းစေသောဗီတာမင် C ၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆေးတစ်လက်ပြင်ဆင်ထားရန်, သင်သံပုရာဖျော်ရည်ကိုတစ်ဇွန်း, အုန်းသီးရေနံ, ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးများနှင့်နွေးထွေးသောသုတ်ပဝါတစ်ဇွန်းလိုအပ်ပါတယ်။
ရင်ဘတ်ပေါ်လမ်းပိုင်းအမှတ်ပေါ်အရည် Apply ။
တစ်ဦးပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးအတူဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့် 30 မိနစ်အထက်ပူပြင်းတဲ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါထားပါ။
ရင်ပတ်ပေါ်လမ်းပိုင်းအမှတ်အဆုံးသတ်နေ့တိုင်းအိပ်ရာမသွားမီကဒီအရောအနှော Apply ။
, ရင်ဘတ်ပေါ်လမ်းပိုင်းအမှတ်၏အသွင်အပြင်ကိုလျှော့ချသံပုရာဖျော်ရည်ကိုတစ်ဇွန်းကိုယူပြီးနှင့်အတူ½လက်ဖက်ရည်ဇွန်းရောထွေးစေရန် glycerin။ ညင်ညင်သာသာမုန်တိုင်းဒဏ်ခံဒေသများပေါ်တွင်အရောအနှောပွတ်ပေးပါ။ သင်အလိုရှိသောရလဒ်များကိုရသည်အထိနေ့စဉ်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်ပါ။
ကိုကိုးထောပတ်နို့ပေါ်လမ်းပိုင်းအမှတ်ကုသရန်ဖို့အကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းကုစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုကိုးထောပတ်ဇီဝနှင့်အတူအသားအရေ Massaging ကော်လာဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်အရေပြားမှသွေးစီးဆင်းမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်, အလှည့်အတွက်လမ်းပိုင်းအမှတ်လျော့နည်းစေသည့်၎င်း၏ elasticity, တိုးတက်အောင်။
ဆံပင်ကျွတ်ဆန့်ကျင်7အကြံပေးချက်များ - Improve သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေး
Discover6အကျိုးကျေးဇူးနဲ့တော်ဝင်ဂျယ်လီ၏ဂုဏ်သတ္တိများ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ